Google Analytics oo bilaabay Studio Studio (Beta) | Martech Zone
Google Analytics wuxuu bilaabay Studio Studio (Beta)
Arbacada, Agoosto 24, 2016 Douglas Karr
Google Analytics ayaa bilaabay Xogta Studio, wehel u ah Analytics si loo dhiso warbixinno iyo dashboodyo.
Istuudiyaha Xogta Google (beta) wuxuu ku siiyaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad xogtaada ugu rogto warbixinno qurux badan, oo macluumaad ah oo si fudud loo akhriyi karo, isla markaana la wadaagi karo, isla markaana si dhammaystiran loo qaabeyn karo. Studio Studio wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto ilaa 5 warbixinood oo caadiya oo leh tafatir iyo wadaagid aan xadidnayn. Dhammaan waa bilaash - hadda oo keliya waxaa laga heli karaa Mareykanka
Istuudiyaha Xogta Google waa cusub aragtida xogta alaabta isku dhafan xogta guud ahaan badeecadaha Google iyo ilaha kale ee xogta - oo u beddelaya qurux, warbixinno is-dhexgal ah iyo dashboodyo iyadoo lala socdo iskaashi waqti-buuxa ah Waa tan warbixin suuq geyn muunad ah:
Waxaan soo qaadnay aalado waawayn oo kuxiran Google Analytics si loo dhiso warbixino qurxoon, sida Wordsmith ee Suuqgeynta, madal loo dhisay wakaaladaha inay dib u eegaan, wax ka beddelaan, oo ay u diraan xulashada caadiga ah ee warbixinnada Google Analytics macaamiishooda. Tani waxay umuuqataa inay ku tartamayso madaxa iyo madaxa, taasoo awood u siinaysa habeynta warbixinnada si fudud loo wadaagi karo.
Qalab la'aan, adeegsadayaasha falanqeeyayaasha ayaa sida caadiga ah dhoofiya xogta ka dibna ku riixaya xaashiyaha si ay u soo saaraan warbixinno la jaangooyay. Istuudiyaha Xogta Google ayaa tan ka adkaanaya, oo siinaya marin-u-helid waqtiga-dhabta ah oo toos ah oo firfircoon labadaba.
Astaamaha Studio Data Google:
Ku xir Falanqaynta Google, AdWords iyo ilaha kale ee xogta si fudud.
Midee xogta xisaabaadka Analytics kala duwan iyo aragtiyaha isla warbixinta.
Habee warbixinno qurxoon, oo ku habboon oo loogu talagalay muuqaalka iyo dareenka ururkaaga.
Share kaliya xogta aad rabto inaad la wadaagto shaqsiyaad gaar ah ama kooxo adeegsadayaal ah.
Xilligan, beta wuxuu u furan yahay guryaha Mareykanka oo keliya.
Isku day istuudiyaha xogta Google
Tags: xogta falanqayntamuuqaalka xogta falanqayntagoogle adwordsgoogle adwords muuqaalka xogtawarbixinta adwords googleAnalytics googleistuudiyaha xogta galka googlexogta googleistuudiyaha xogta googlemuuqaalka xogta googleWordsmith ee Suuqgeynta
4 Caqabadaha Hortaagan Hirgelinta Suuq Gelinta Guusha
Aug 25, 2016 at 8: 29 AM
aad u soo jiidasho leh. Waxyaabo kale oo gaar ah ama la casriyeeyay.